ယေဟောဝါရဲ့သိုးထိန်းတွေကို နာခံပါ | လေ့လာရန်
“ဆုတောင်းခြင်းအမှု၌ နိုးနိုးကြားကြား ရှိကြလော့”
လိုအပ်နေသူတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီပေးနိုင်ပုံ
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ‘စိတ်ရှည်ရှည် စောင့်နေ’ နိုင်သလဲ
ဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိ ဘုရားအမှုဆောင်တာက သူ့အတွက် ဆေးပဲ!
သိုးထိန်းခုနစ်ယောက်နဲ့ မင်းညီမင်းသားရှစ်ယောက်က ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိသလဲ
သိုးထိန်းတို့၊ အကြီးမြတ်ဆုံးသိုးထိန်းတွေကို တုပကြပါ
မော်ကွန်းတိုက်မှ “ကျွန်တော်က လိပ်ခွံထဲက လိပ်နဲ့တူတယ်၊ ကျွန်တော်သွားလေရာမှာ ကျွန်တော့်အိမ် အမြဲပါတယ်
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃
ဖတ်လို ကင်ယာဝန်ဒါ ကမ္ဘောဒီးယား ကာဇက် ကာတာလန် ကာရ်ဂီ ကိုရီးယား ကိုလံဘီယာ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ကီကူယူ ကီချူဝါ (ဘိုလစ်ဗီးယား) ကီချူဝါ (အိုင်ယာကူချို) ကီရွန်ဒီ ကွမ်ဂါလီ ကွမ်ယာမာ ခရိုအေးရှား ချက် ချီချေဝါ ဂရင်းလန်း ဂရိ ဂါ ဂျပန် ဂျပန် လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယာ ဂွာရာနီ စင်ဟာလာ စပိန် စရာနန်တွန်ဂို စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် စီဘွာနို ဆက်ဆိုသို (လီဆိုသို) ဆက်ဆွာနာ ဆားဗီးယား ဆားဗီးယား (ရိုမန်) ဆွာတီ ဆွာဟီလီ ဆွီဒင် ဇူးလူး တဂါးလော့ တဆောန်ဂါ တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တဟီတီ တာတာ တီဂရင်ယာ တူရကီ တွီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒန်မီ ဒိန်းမတ် နီပေါ နော်ဝေ ပန်ဂါဆီနန် ပိုလန် ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဗန်ဒါ ဗီယက်နမ် ဘရာဇီး လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ဘိုင်ကိုးလ် ဘူလ်ဂေးရီးယား မက္ကဆီကို လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား မလေး မာလဂက်စီ မော်လ်တီစ် မြန်မာ ယူကရိန်း ယူရွန် ယောရာဘာ ရိုမေးနီးယား ရုရှား ရုရှား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား ရှိုစာ ရှိုနာ လင်ဂါလာ လစ်သူယေးနီးယား လတ်ဗီးယား လူအို ဝါရေး‑ဝါရေး ဝိုလိတ်တာ ဝေယူနာအီကီ ဟန်ဂေရီ ဟီဘရူး ဟီလီဂေနွန် ဟေတီ ခရီအိုးလ် အက်စတိုးနီးယား အက်ဖစ်ခ် အင်ဂါဘာရီ အင်ဇီမာ အင်ဒက်ဘယ်လီ အင်ဒိုနီးရှား အင်ဒွန်ဂါ အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အဇာဘိုင်ဂျန် အဇာဘိုင်ဂျန် (ဆီးရီးလစ်) အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဂျင်တီးနား လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အာဖရိက အာမေးနီးယား အာရဗီ အိုက်စလန် အိုရိုမို အီတလီ အီတလီ လက်သင်္ကေတပြဘာသာစကား အီလိုကို အေမာရာ အေးဝေး ဥဇဘက်
“သင်တို့တွင် ဦးဆောင်သူများကို နာခံကြလော့။ လက်အောက်ခံကြလော့။ အကြောင်းမူကား သူတို့သည် . . . သင်တို့ကို ဂရုစိုက်ကြည့်ရှု နေကြ၏။”—ဟေဗြဲ ၁၃:၁၇။
ဘုရားသခင့်သိုးတွေကို အသင်းတော် အကြီးအကဲတွေ ဘယ်လိုထိန်းကျောင်းသလဲ။
အသင်းတော်မှာရှိတဲ့သိုးထိန်းတွေရဲ့စကားကို သိုးတွေ ဘာကြောင့် နားထောင်သင့်သလဲ။
အကြီးအကဲတွေရဲ့အားနည်းချက်က ဘာကြောင့် သူတို့ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ဖို့၊ သူတို့ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေကို ငြင်းပယ်ဖို့ အကြောင်းပြချက် မဟုတ်သလဲ။
၁၊ ၂။ ယေဟောဝါက ဘာကြောင့် မိမိကိုယ်ကို သိုးထိန်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာလဲ။
ယေဟောဝါဟာ မိမိကိုယ်ကို သိုးထိန်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ထားတယ်။ (ယေဇ. ၃၄:၁၁-၁၄) ဒါက ယေဟောဝါဟာ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ကို သိရှိစေတယ်။ မေတ္တာရှိတဲ့သိုးထိန်းတစ်ဦးဟာ သူထိန်းကျောင်းရတဲ့သိုးတွေရဲ့အသက်အတွက် သူ့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ သိုးတွေကို အစာနဲ့ရေရှိတဲ့နေရာကို ပို့ပေးရပြီး သိုးပေါက်လေးတွေကို ချီပိုက်ရတယ်။ (ဆာ. ၂၃:၁၊ ၂; ဟေရှာ. ၄၀:၁၁) သိုးတွေကို နေ့ရောညပါ စောင့်ရှောက်ရပြီး တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးရတယ်။ (၁ ရာ. ၁၇:၃၄၊ ၃၅; လု. ၂:၈) သိုးအုပ်နဲ့ကွဲပြီး လမ်းပျောက်နေတဲ့သိုးတွေကို ရှာရတယ်၊ ဒဏ်ရာရနေတဲ့သိုးတွေကို ပြုစုရတယ်။—ယေဇ. ၃၄:၁၆။
၂ ရှေးခေတ်တုန်းက ဘုရားသခင့်ကျေးကျွန်အများစုဟာ သိုးထိန်းနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ယေဟောဝါ ဘာကြောင့် မိမိကိုယ်ကို သိုးထိန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်သလဲဆိုတာ သူတို့နားလည်တယ်။ သိုးတွေ ကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှုလိုတယ်ဆိုတာ သူတို့သိတယ်။ အဲဒီလိုပဲ လူတွေလည်း ယေဟောဝါရဲ့ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ လမ်းညွှန်မှုလိုအပ်တယ်။ (မာ. ၆:၃၄) ယေဟောဝါရဲ့ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ လမ်းညွှန်မှုမရှိရင် လူတွေ ဒုက္ခတွေ့မှာဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ အမှားနဲ့အမှန်ကို မခွဲခြားနိုင်ဘူး၊ သူတို့ကို ကာကွယ်ပေးမယ့်သူလည်း မရှိဘူး။ သူတို့က ‘ထိန်းသူမရှိတဲ့သိုး’ တွေနဲ့တူတယ်။ (၃ ရာ. ၂၂:၁၇) ဒါပေမဲ့ ယေဟောဝါကတော့ မိမိရဲ့လူတွေ လိုအပ်တာမှန်သမျှ ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်။
၃။ ဒီဆောင်းပါးမှာ ဘာတွေကို လေ့လာကြမလဲ။
၃ ယေဟောဝါက သိုးထိန်းနဲ့ တူတယ်ဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့လည်း သိတယ်။ ဒီနေ့အချိန်မှာ ကိုယ်တော်ဟာ မိမိရဲ့လူတွေကို သေချာ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကိုယ်တော် ဘယ်လို လမ်းညွှန်ပေးပြီး ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာ လေ့လာကြပါမယ်။ ပြီးတဲ့နောက် ယေဟောဝါရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်မှုကနေ အကျိုးခံစားရဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ဆွေးနွေးကြမယ်။
သိုးထိန်းကောင်းက လက်ထောက်သိုးထိန်းတွေကို ခန့်အပ်
၄။ ယေဟောဝါရဲ့သိုးတွေကို ယေရှု ဘယ်လိုဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်သလဲ။
၄ ယေဟောဝါက ယေရှုကို ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်းအဖြစ် တာဝန်ခန့်အပ်ခဲ့တယ်။ (ဧ. ၁:၂၂၊ ၂၃) “သိုးထိန်းကောင်း” ဖြစ်တဲ့ ယေရှု ဟာ သူ့ဖခင်လိုပဲ သိုးတွေကိုချစ်ပြီး ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်။ သိုးတွေအတွက် သူ့ရဲ့အသက်ကိုတောင် ပေးခဲ့တယ်။ (ယော. ၁၀:၁၁၊ ၁၅) ခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနုတ်ဖိုးဟာ လူသားအားလုံးအတွက် ထူးမြတ်လှတဲ့လက်ဆောင်ပါပဲ။ (မ. ၂၀:၂၈) ယေဟောဝါရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ယေရှုကိုယုံကြည်ကြောင်း တင်ပြသူအားလုံး “ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ဘဲ ထာဝရအသက်ကို ရစေ” ဖို့ဖြစ်တယ်။—ယော. ၃:၁၆။
၅၊ ၆။ (က) ယေရှုက မိမိရဲ့သိုးတွေကို ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ဖို့ ဘယ်သူတွေကို ရွေးချယ်ခဲ့သလဲ။ ယေရှုရဲ့စောင့်ရှောက်မှုကနေ အကျိုးခံစားရဖို့ သိုးတွေ ဘာလုပ်ရမလဲ။ (ခ) အကြီးအကဲတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ လိုလိုလားလား နာခံမှုပြရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းက ဘာလဲ။
၅ သိုးတွေဟာ သိုးထိန်းကောင်း ယေရှုခရစ်ကို ဘယ်လို တုံ့ပြန်ကြသလဲ။ “ငါ၏သိုးတို့သည် ငါ့စကားသံကို နားထောင်ကြ၏။ ထိုသိုးတို့ကို ငါသိ၍ သူတို့သည်လည်း ငါ့နောက်သို့ လိုက်ကြ၏” လို့ ယေရှုပြောခဲ့တယ်။ (ယော. ၁၀:၂၇) သိုးထိန်းကောင်းရဲ့စကားသံကို နားထောင်တယ်ဆိုတာ သူ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကို အမြဲလိုက်နာခြင်းကို ဆိုလိုတယ်။ အဲဒီထဲမှာ သိုးအုပ်ကို ထိန်းကျောင်းရာမှာ မိမိကိုကူညီဖို့ ယေရှုခန့်အပ်ထားတဲ့ လက်ထောက်သိုးထိန်းတွေရဲ့စကားကို နားထောင်ခြင်းလည်း ပါဝင်တယ်။ ပထမရာစုမှာ ယေရှုက မိမိရဲ့နောက်လိုက်တွေကို ထိန်းကျောင်းဖို့ တမန်တော်တွေနဲ့ တပည့်တွေကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ယေရှုက မိမိရဲ့ “သိုးသငယ်” တွေကို သွန်သင်ပေးဖို့၊ ကျွေးမွေးဖို့ သူတို့ကို ပြောခဲ့တယ်။ (ယောဟန် ၂၁:၁၅-၁၇ ကို ဖတ်ပါ; မ. ၂၈:၂၀) သတင်းကောင်းဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်း ပျံ့နှံ့လာတာနဲ့အမျှ တပည့်တွေလည်း တိုးများလာတယ်။ ဒါကြောင့် အသင်းတော်တွေကို ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ဖို့ ရင့်ကျက်တဲ့သိုးထိန်းတွေကို ခန့်အပ်ဖို့ ယေရှုစီစဉ်ခဲ့တယ်။—ဧ. ၄:၁၁၊ ၁၂။
၆ နောက်ပိုင်းမှာ ပေါလုက ဧဖက်အသင်းတော်က အကြီးအကဲတွေကို “အသင်းတော်ကို ထိန်းကျောင်းရန် ကြီးကြပ်မှူးများအဖြစ် သင်တို့ကို သန့်ရှင်းသော စွမ်းအားတော်ဖြင့် ခန့်ထား” တယ်လို့ စာရေးပြီး ပြောခဲ့တယ်။ (တ. ၂၀:၂၈) ယနေ့အချိန်မှာရှိတဲ့အကြီးအကဲတွေလည်း သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်နဲ့ ခန့်အပ်ခံရသူတွေဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့် အဲဒီလို ပြောနိုင်တာလဲ။ အကြောင်းကတော့ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော် တိုက်တွန်းမှုနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ ကျမ်းစာပါတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့အညီ သူတို့ကို ခန့်အပ်ထားလို့ပဲ။ ဒါကြောင့် အကြီးအကဲတွေကို နာခံတာက အကြီးမြတ်ဆုံး သိုးထိန်းနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ယေဟောဝါနဲ့ ယေရှုကို နာခံတာဖြစ်တယ်။ (လု. ၁၀:၁၆) ဒါက အကြီးအကဲတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ လိုလိုလားလား နာခံမှုပြရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကို လိုက်နာသင့်တဲ့ တခြားအကြောင်းရင်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
၇။ ယေဟောဝါနဲ့ကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးရှိနေစေဖို့ အကြီးအကဲတွေ သင့်ကို ဘယ်လိုကူညီပေးသလဲ။
၇ ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေကို အကြီးအကဲတွေပေးတဲ့ အားပေးမှုနဲ့ လမ်းညွှန်မှုက အမြဲပဲ ကျမ်းစာပေါ်အခြေခံတယ်။ အကြီးအကဲတွေက မိမိတို့ရဲ့ညီအစ်ကိုတွေကို ဘယ်လို အသက်ရှင်နေထိုင်ရမယ်ဆိုတာ သတ်မှတ်ပေးတာမျိုး မလုပ်လိုပါကြဘူး။ (၂ ကော. ၁:၂၄) အဲဒီအစား သူတို့က ညီအစ်ကိုတွေ ကျမ်းစာကိုအခြေခံပြီး ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ ကူညီပေးချင်ကြတယ်။ အကြီးအကဲတွေဟာ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အသင်းတော် စည်းလုံးငြိမ်သက်မှုရှိဖို့ ကူညီပေးကြတယ်။ (၁ ကော. ၁၄:၃၃၊ ၄၀) အကြီးအကဲတွေက “သင်တို့ကို ဂရုစိုက်ကြည့်ရှုနေ” တယ်လို့ ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။ ဆိုလိုတာက အကြီးအကဲတွေဟာ အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ တစ်ယောက်စီကို ယေဟောဝါနဲ့ ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေစေဖို့ ကူညီပေးချင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့က “ခြေလှမ်းမှား” တော့မယ့်၊ ဒါမှမဟုတ် မှားနေတဲ့ ညီအစ်ကို၊ ညီအစ်မတစ်ယောက်ကို ချက်ချင်း ကူညီပေးကြတယ်။ (ဂလ. ၆:၁၊ ၂; ယု. ၂၂) ဒါကြောင့် “ဦးဆောင်သူများကို နာခံကြ” ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့မှာ အကြောင်းကောင်းများစွာ ရှိပါတယ်။—ဟေဗြဲ ၁၃:၁၇ ကိုဖတ်ပါ။
၈။ အကြီးအကဲတွေဟာ အသင်းတော်ကို ဘယ်လိုကာကွယ်ပေးသလဲ။
၈ ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ သိုးထိန်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ တမန်တော်ပေါလုက ကောလောသဲမှာရှိတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေကို ဒီလို သတိပေးခဲ့တယ်– “ခရစ်တော်၏ သွန်သင်ချက်အတိုင်းမလိုက်၊ လောက၏ အခြေခံတရားကို လိုက်၍ လူ့ထုံးတမ်းစဉ်လာပေါ် အခြေပြုသော အတွေးအခေါ်နှင့် အကျိုးမဲ့ လှည့်ဖြားပြောဆိုခြင်းအားဖြင့် သင်တို့ကို သားကောင်အဖြစ် ဖမ်းယူမည့်သူတစ်ဦးဦး ရှိနိုင်သောကြောင့် သတိပြုကြလော့။” (ကော. ၂:၈) ဒီသတိပေးချက်က အကြီးအကဲတွေရဲ့ လမ်းညွှန်မှုကိုနာခံဖို့ အရေးကြီးတဲ့ နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကို သိရှိဖို့ ကူညီပေးတယ်။ သူတို့က သူတို့ရဲ့ညီအစ်ကိုတွေကို ယေဟောဝါထံကနေ လမ်းလွဲသွားဖို့ လုပ်ဆောင်နေသူတွေရဲ့ ရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးကြတယ်။ “ပရောဖက်အတုအယောင်များ” နဲ့ “ဆရာအတုအယောင်များ” ဟာ အားနည်းနေတဲ့ ခရစ်ယာန်တွေကို အမှားလုပ်ဖို့ သွေးဆောင်လိမ့်မယ်လို့ တမန်တော်ပေတရု သတိပေးခဲ့တယ်။ (၂ ပေ. ၂:၁၊ ၁၄) ယနေ့အချိန်မှာလည်း အကြီးအကဲတွေဟာ လိုအပ်လာတဲ့အခါ အလားတူသတိပေးချက်တွေ ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ အကြီးအကဲတွေဟာ ဘဝအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် အကြီးအကဲအဖြစ် ခန့်အပ်ခံရသူတွေဟာ မခန့်အပ်ခံရခင်ကတည်းက ကျမ်းစာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ကြောင်း၊ ကျမ်းစာပါအမှန်တရားကို သွန်သင်ပေးဖို့ အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်း ဖော်ပြပြီးဖြစ်တယ်။ (၁ တိ. ၃:၂; တိ. ၁:၉) သူတို့ရဲ့ ရင့်ကျက်မှု၊ မျှတမှုနဲ့ ကျမ်းစာပေါ်အခြေခံတဲ့ဉာဏ်ပညာက ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေကို ကောင်းကောင်းလမ်းညွှန်နိုင်ဖို့ သူတို့ကို ကူညီပေးတယ်။
သိုးထိန်းက သူ့ရဲ့သိုးအုပ်ကို ကာကွယ်ပေးသလိုပဲ အကြီးအကဲတွေက အသင်းတော်မှာရှိသူတွေကို ကာကွယ်ပေး (အပိုဒ် ၈ ကိုကြည့်ပါ)
သိုးထိန်းကောင်းက သိုးတွေကို အစာကျွေးပြီး ကာကွယ်ပေး
၉။ ယနေ့အချိန်မှာ အသင်းတော်ကို ယေရှု ဘယ်လို ကျွေးမွေး၊ လမ်းညွှန်သလဲ။
၉ ယေဟောဝါဟာ မိမိရဲ့အဖွဲ့အစည်းကို အသုံးပြုပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေကို သွန်သင်၊ လမ်းညွှန်ပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စာပေတွေမှာ ကျမ်းစာအခြေခံသွန်သင်ချက် များစွာပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ အဖွဲ့အစည်းက အသင်းတော်အကြီးအကဲတွေကို တိုက်ရိုက်လမ်းညွှန်တယ်။ အကြီးအကဲတွေဟာ အဲဒီလမ်းညွှန်ချက်ကို စာတွေ ဒါမှမဟုတ် နယ်လှည့်ကြီးကြပ်မှူးတွေပေးတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကနေ ရတယ်။ သိုးတွေက ဒီနည်းလမ်းတွေအားလုံးကနေ ရှင်းလင်းတဲ့လမ်းညွှန်ချက် ရကြတယ်။
၁၀။ ညီအစ်ကိုညီအစ်မတစ်ယောက် အသင်းတော်နဲ့ ဝေးသွားတဲ့အခါ ဂရုစိုက်တဲ့သိုးထိန်းတွေမှာ ဘာတာဝန်ရှိသလဲ။
၁၀ ဂရုစိုက်တဲ့သိုးထိန်းတွေက သိုးတွေကို ကာကွယ်ဖို့၊ စောင့်ရှောက်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်။ ခရစ်ယာန်အကြီးအကဲတွေဟာ အထူးသဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလာသူတွေ ဒါမှမဟုတ် ကြီးလေးတဲ့အမှား ကျူးလွန်သူတွေအတွက် စိုးရိမ်ပေးတယ်။ (ယာကုပ် ၅:၁၄၊ ၁၅ ကိုဖတ်ပါ။) တချို့သူတွေက အသင်းတော်နဲ့ဝေးသွားပြီး ဘုရားသခင်ကို ဆက်အမှုမဆောင်တော့တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဂရုစိုက်တဲ့သိုးထိန်းတစ်ယောက်က အကူအညီပေးဖို့ ဘာလုပ်မလဲ။ အဲဒီလိုလူတွေကိုရှာဖွေပြီး အသင်းတော်ဆီပြန်လာဖို့ အားပေးရာမှာ သူလုပ်နိုင်သမျှ အားလုံးကို လုပ်မှာဖြစ်တယ်။ ယေရှုက “ကောင်းကင်ဘုံရှိ ငါ့အဖသည် ဤသူငယ်တစ်ဦးကိုမျှ ပျက်စီးစေရန် အလိုတော်မရှိ” လို့ပြောခဲ့တယ်။—မ. ၁၈:၁၂-၁၄။
အကြီးအကဲတွေရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လို ရှုမြင်သင့်သလဲ
၁၁။ တချို့သူတွေ ဘာကြောင့် အကြီးအကဲတွေကို နာခံဖို့ ခက်ခဲနိုင်သလဲ။
၁၁ ယေဟောဝါနဲ့ ယေရှုဟာ ပြည့်ဝစုံလင်တဲ့ သိုးထိန်းတွေဖြစ်တယ်။ အသင်းတော်ကို ကြည့်ရှုနေတဲ့ လူသားသိုးထိန်းတွေကတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ ဒီအချက်က အကြီးအကဲတွေကို နာခံဖို့ တချို့သူတွေအတွက် အခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်တယ်။ သူတို့က ‘အကြီးအကဲတွေလည်း ငါတို့လို အားနည်းချက်ရှိတဲ့သူတွေပဲ။ သူတို့ပြောတာကို ဘာဖြစ်လို့ နားထောင်ရမှာလဲ’ လို့ စဉ်းစားမိနိုင်တယ်။ အကြီးအကဲတွေဟာ အားနည်းချက်ရှိတဲ့သူတွေဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်ုပ်တို့က သူတို့ရဲ့ အားနည်းချက်နဲ့ အမှားတွေကို အာရုံမစိုက်ရဘူး။
၁၂၊ ၁၃။ (က) ရှေးအချိန်က ဘုရားသခင်ခန့်အပ်ထားတဲ့ တာဝန်ရှိကျေးကျွန်တွေဟာ ဘာအမှားတွေ ကျူးလွန်ခဲ့ကြသလဲ။ (ခ) ယေဟောဝါဟာ ဘာကြောင့် တာဝန်ရှိအမျိုးသားတွေရဲ့အမှားတွေကို ကျမ်းစာမှာ မှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တာလဲ။
၁၂ ကျမ်းစာမှာ အတိတ်က ယေဟောဝါရဲ့လူတွေကို ဦးဆောင်ဖို့ ကိုယ်တော်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ အမှားတွေကို အမှန်အတိုင်း ဖော်ပြထားတယ်။ ဥပမာ၊ ဒါဝိဒ်က အစ္စရေးဘုရင်အဖြစ် ဘိသိက်ပေးခံရတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ သွေးဆောင်မှုကို မတွန်းလှန်နိုင်တော့ဘဲ တခြားသူရဲ့မယားကို ပြစ်မှားပြီး လူသတ်တဲ့အထိ အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ (၂ ရာ. ၁၂:၇-၉) တမန်တော်ပေတရုအကြောင်းလည်း စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ပထမရာစု ခရစ်ယာန်အသင်းတော်မှာ ကြီးလေးတဲ့တာဝန်တွေ ပေးအပ်ခံရပေမဲ့ သူလည်း ကြီးလေးတဲ့အမှားတွေကို လုပ်ခဲ့မိတယ်။ (မ. ၁၆:၁၈၊ ၁၉; ယော. ၁၃:၃၈; ၁၈:၂၇; ဂလ. ၂:၁၁-၁၄) အာဒံနဲ့ဧဝအချိန်ကစပြီး ယေရှုကလွဲလို့ ဘယ်လူသားမှ မစုံလင်ဘူး။
၁၃ ယေဟောဝါဟာ ဘာကြောင့် တာဝန်ရှိကျေးကျွန်တချို့ရဲ့ အမှားတွေကို ကျမ်းစာမှာ မှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တာလဲ။ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက မိမိရဲ့လူတွေကို ဦးဆောင်ဖို့ မစုံလင်တဲ့လူတွေကို ကိုယ်တော်အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြဖို့ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်တော် တကယ်လည်း အမြဲတမ်း အဲဒီလိုအသုံးပြုခဲ့တယ်။ အဲဒါကြောင့် အကြီးအကဲတွေရဲ့ မစုံလင်မှုက သူတို့ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ဖို့၊ သူတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာကို မလေးမစားလုပ်ဖို့ အကြောင်းပြချက် မဖြစ်သင့်ဘူး။ အဲဒီလိုညီအစ်ကိုတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ လေးစားပြီးနာခံဖို့ ယေဟောဝါအလိုရှိတယ်။—ထွက်မြောက်ရာ ၁၆:၂၊ ၈ ကိုဖတ်ပါ။
၁၄၊ ၁၅။ ရှေးအချိန်က ယေဟောဝါ မိမိကျေးကျွန်တွေကို ညွှန်ကြားချက်ပေးပုံကနေ ဘာသင်ယူနိုင်သလဲ။
၁၄ အကြီးအကဲတွေကို နာခံဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ရှေးတုန်းက ယေဟောဝါရဲ့လူမျိုး ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ ယေဟောဝါ ဘယ်လို လမ်းညွှန်ခဲ့တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဥပမာ၊ အစ္စရေးလူမျိုး အီဂျစ်ပြည်ကနေ ထွက်လာတုန်းက ဘုရားသခင်ဟာ မောရှေနဲ့ အာရုန်ကတစ်ဆင့် လူတွေကို အရေးကြီးတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေပေးခဲ့တယ်။ အစ္စရေးလူတွေဟာ ဆယ်ခုမြောက်ကပ်ဘေးကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို လိုက်နာခဲ့ရတယ်။ အထူးအစားအစာတစ်မျိုးကိုစားဖို့၊ သိုးတစ်ကောင်သတ်ဖို့၊ သိုးရဲ့အသွေးတချို့ကို သူတို့ရဲ့အိမ်တံခါးတိုင်တွေနဲ့ တံခါးထုပ်မှာသုတ်ဖို့ ညွှန်ကြားချက်တွေ ရခဲ့ကြတယ်။ အဲဒါတွေကို ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် သူတို့ကို တိုက်ရိုက်ပြောသလား။ မပြောပါဘူး၊ အစ္စရေးလူတွေဟာ မောရှေဆီက ညွှန်ကြားချက်တွေရတဲ့ အသက်ကြီးသူတွေရဲ့စကားကို နားထောင်ခဲ့ရတယ်။ (ထွ. ၁၂:၁-၇၊ ၂၁-၂၃၊ ၂၉) ဒီနည်းအားဖြင့် ယေဟောဝါဟာ လူတွေကိုညွှန်ကြားဖို့ မောရှေနဲ့ အသက်ကြီးသူတွေကို အသုံးပြုခဲ့တယ်။ ဒီနေ့အချိန်မှာ ယေဟောဝါဟာ ခရစ်ယာန်အကြီးအကဲတွေကို အသုံးပြုတယ်။
၁၅ ယေဟောဝါဟာ မိမိရဲ့ကျေးကျွန်တွေကို ညွှန်ကြားချက်တွေပေးဖို့ လူတွေ ဒါမှမဟုတ် ကောင်းကင်တမန်တွေ ကိုသုံးတဲ့ ကျမ်းစာပါ တခြားအဖြစ်အပျက်များစွာကိုလည်း သင်စဉ်းစားမိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီဖြစ်ရပ်တွေမှာ ညွှန်ကြားချက်တွေက သူတို့ရဲ့အသက်ကို ကယ်တင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအခြေအနေတွေအားလုံးမှာ ယေဟောဝါဟာ မိမိကိုယ်စားပြောဆိုဖို့နဲ့ အန္တရာယ်ကြုံရချိန်မှာ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မိမိရဲ့လူမျိုးကို ပြောဖို့ တခြားသူတွေကို အခွင့်အာဏာပေးအပ်ခဲ့တယ်။ အာမဂေဒုန်မှာလည်း ယေဟောဝါဟာ မိမိရဲ့ကျေးကျွန်တွေအကျိုးအတွက် အဲဒီနည်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်မယ်လို့ ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်စရာအကြောင်းရှိပါတယ်။ ယေဟောဝါ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တော့်အဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်စားပြုရတဲ့တာဝန် ရရှိထားတဲ့ အကြီးအကဲတွေဟာ မိမိတို့ကိုပေးအပ်ထားတဲ့ အခွင့်အာဏာကို အလွဲသုံးစားမလုပ်မိစေဖို့ အသေအချာဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။
၁၆။ ကျွန်ုပ်တို့ နားထောင်ရမယ့် “စကားသံ” ကဘာလဲ။
၁၆ ယေဟောဝါရဲ့ကျေးကျွန်တွေဟာ “သိုးထိန်းတစ်ပါး” ယေရှုခရစ်ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ “သိုးအုပ်တစ်အုပ်” ဖြစ်တယ်။ (ယော. ၁၀:၁၆) ယေရှုက “ဤလောကစနစ်နိဂုံးပိုင်းတိုင်အောင်” တပည့်တွေနဲ့အတူရှိမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ (မ. ၂၈:၂၀) ကောင်းကင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ ယေရှုဟာ စာတန့်လောကကို သူကိုယ်တိုင် မဖျက်ဆီးခင် ဖြစ်ပျက်မယ့်အဖြစ်အပျက်အားလုံးကို အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်ထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဘုရားသခင့်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံး လုံလုံခြုံခြုံ ရှိနေနိုင်သလဲ။ ကျမ်းစာမှာ “ဤမည်သောလမ်းသည် မှန်၏။ ဤလမ်း၌သွားလော့ဟု သင့်နောက်၌ပြောသော စကားသံကို ကိုယ်နားနှင့် ကြားရလိမ့်မည်” လို့အဖြေပေးတယ်။ အဲဒီ “စကားသံ” ထဲမှာ ကျမ်းစာမှာပါတဲ့ ယေဟောဝါ သွန်သင်ပေးတဲ့အရာတွေ၊ ယေဟောဝါနဲ့ယေရှု ခန့်အပ်ထားတဲ့ လက်ထောက်သိုးထိန်းတွေကတစ်ဆင့် ပြောတဲ့အရာတွေ ပါတယ်။—ဟေရှာယ ၃၀:၂၁; ဗျာဒိတ် ၃:၂၂ တို့ကိုဖတ်ပါ။
အကြီးအကဲတွေဟာ ကြင်ဖော်မဲ့မိဘရှိတဲ့ မိသားစုတွေကို မကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကနေ ကာကွယ်ဖို့ ကြိုးစားကြ (အပိုဒ် ၁၇၊ ၁၈ ကိုဖတ်ပါ)
၁၇၊ ၁၈။ (က) ဘုရားသခင့်ကျေးကျွန်တွေ ဘယ်လိုအန္တရာယ်နဲ့ ကြုံတွေ့နေရသလဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်အချက်ကို စိတ်ချနိုင်သလဲ။ (ခ) လာမယ့်ဆောင်းပါးမှာ ဘယ်အကြောင်းတွေ ဆွေးနွေးမလဲ။
၁၇ စာတန်ဟာ “ဟောက်သောခြင်္သေ့ကဲ့သို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျိုရန် လှည့်လည်ရှာဖွေ” နေတယ်လို့ ကျမ်းစာက ပြောတယ်။ (၁ ပေ. ၅:၈) ဆာလောင်နေတဲ့ သားရိုင်းတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လိုပဲ စာတန်ဟာ သိုးအုပ်ကို ချောင်းမြောင်းနေတယ်၊ အားနည်းနေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် သိုးအုပ်နဲ့ကွဲနေတဲ့သိုးကို တိုက်ခိုက်ဖို့ အခွင့်ကောင်းစောင့်နေတယ်။ ဒါက အသင်းတော်နဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ “သိုးထိန်း” တွေနဲ့ အမြဲနီးနီးကပ်ကပ်နေသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲ။ (၁ ပေ. ၂:၂၅) ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုကပ်ကျော်မယ့် သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗျာဒိတ် ၇:၁၇ မှာ ဒီလိုပြောတယ်– “သိုးသငယ် [ယေရှု] သည် သူတို့ကို ထိန်းကျောင်း၍ အသက်စမ်းရေသို့ ပို့ဆောင်တော်မူမည်။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏မျက်ရည်ရှိသမျှကို အကုန်အစင် သုတ်တော်မူမည်။” ဒီထက်ကောင်းတဲ့ကတိ မရှိနိုင်တော့ပါဘူး။
၁၈ အသင်းတော်ကိုထိန်းကျောင်းနေရတဲ့ အကြီးအကဲတွေရဲ့တာဝန်က အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီခန့်အပ်ခံအကြီးအကဲတွေဟာ ယေရှုရဲ့သိုးတွေကို သေချာဂရုစိုက်နေတယ်ဆိုတာ ဘယ်လို သေချာစေနိုင်သလဲ။ ဒီမေးခွန်းကို လာမယ့်ဆောင်းပါးမှာ ဆွေးနွေးပါလိမ့်တယ်။
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃